बुवाले आफन्तकहाँ छन् भनेकी हजुरआमा नातिनीले वृद्धाश्रममा भेटेपछि..., यस्तो छ भाइरल तस्बिरको सत्यता - Sagarmatha TV
बीबीसी । एउटा तस्बिरले हजारौं शब्दभन्दा बढी कथा भन्न सक्छ भने जस्तै एउटा तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । तस्बिरसँगै यसको क्याप्सनले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको तस्बिरसँगै लेखिएको छ, ‘‘एउटा स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई भ्रमणका लागि वृद्धाश्रम लगेको थियो, जहाँ एउटी छात्राको आफ्नी हजुरआमालाई भेटिन् । ती छात्राले आफ्ना बाआमासँग हजुरआमाको बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले आफ्नो नातेदारकहाँ गएर बस्ने गरेको बताएका थिए । के यस्तै खालको समाज बनाइरहेका छौं हामी ?’’
हेर्दाहेर्दै पछिल्लो दुई दिन यता यो तस्बिर किै भाइरल भएको छ । सर्वसाधारणसँगै भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल र क्रिकेटर हरभजन सिंहले समेत आफ्नो फेसबुर र ट्विटरमा यसलाई सेयर गरेका छन् । के यो तस्बिरमा लेखिएको क्याप्सन सही हो ? तस्बिर अहिलेकै हो कि पुरानो ? यी सबै सवालहरुको जवाफ गुजरातका वरिष्ठ फोटो पत्रकार कल्पित भचेचले बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा दिएका छन् ।
‘‘पत्रकारितामा कस्तो–कस्तो संयोग बन्न जान्छ, यो कहानी यसैका बारेमा छ । २००७ सेप्टेम्बर १२ । मेरो जन्मदिनभन्दा एक दिन अगाडि । म बिहान ९ बजे घरबाट निस्कन लागेको थिएँ । श्रीमतीले मलाई राति घर फर्किनु भनिन् किनकी उनी आज राति १२ बजे केक काट्नुपर्ने पक्षमा थिइन् ।
म खुसी हुँदै घरबाट निस्किएँ । केहीबेर मै मेरो मोबाइलमा अहमदाबादको मणिनगरस्थित जिएनसी स्कुलबाट फोन आयो । प्रिन्सिपल रीटा बहन पाण्ड्याको थियो । उनले भनिन्, ‘‘म आफ्नो स्कुलका नानीहरु लिएर वृद्धाश्रम जाँदैछु । के तपाईं यो भ्रमणको फोटो कभर गर्न सक्नुहुन्छ ?’’
म तयार भएँ र घोडासरको मणिलाल गान्धी वृद्धाश्रम पुगेँ । त्यहाँ एकातिर नानीहरु थिए भने अर्कातिर वृद्धाहरु । मैले वृद्धाहरुको साथ बस्न ती नानीहरुलाई आग्रह गरेँ ताकि राम्रो फोटो खिचियोस् ।
जस्तै उनीहरु उभिए, एक छात्रा वृद्धातर्फ हेर रुन थालिन । अचम्म त यो थियो कि नजिकै रहेकी वृद्धा पनि ती छात्रालाई देखेर उसैगरी रोई रहेकी थिइन् । त्यसपछि ती छात्रा हतारमा दौडिएर वृद्धासँग गइन् र अँगालोमा कस्सिइन् । यो देखेर त्यहाँ उपस्थित सबैजना अचम्म परे ।
मैले ठिक त्यही बेला यो दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गरेको हुँ । मैले ती वृद्धासँग बुझ्न चाहेँ । उनी रोइरहेकै थिइन् । पछि थाहा भयो, उनीहरु हजुरआमा र नातिनी रहेछन् ।
ती छात्राले पनि वृद्धा आफ्नो ‘बा’ भएको बताइन् । गुजरातीमा हजुरआमालाई ‘बा’ भनिन्छ । हजुरआमा बिना मेरो जिन्दगी शून्य लाग्छ ति नानीले आँसु पुछ्दै भनिन् । उनले यो पनि सुनाइन् कि बुवाले हजुरआमा नातेदार कहाँ बस्न गएको बताएका थिए । तर वृद्धाश्रम पुगेपछि थाहा भयो, हजुरआमा कहाँ गएकी रहिछन् !
हजुरआमा–नातिनीको यो सुखद मिलन देखेपछि त्यहाँ भएका अरु वृद्धा र उनका साथीहरुका आँखा रसाएका थिए । त्यो भावुक माहोललाई सामान्य बनाउन केही विद्यार्थीहरुले भजन गाएका थिए । यो तस्बिर पहिलो दिन ‘दिव्य भाष्कर’ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको थियो । त्यसपछि पूरा गुजरातमा यही तस्बिरलाई लिएर निकै चर्चा पनि चल्यो । यो तस्बिरले धेरैलाई तरंगित बनाएको छ ।
तर अर्को दिन म अरु पत्रकार साथीहरुका साथ ती वृद्धाको अन्तरवार्ता लिन पुग्दा उनले आप्mनै खुशीले वृद्धाश्रम आएको र आफ्नै चाहनाले बसिरहेको जवाफ दिइन् ।’’